USB Raw Gadget, module yeKernel iyo inobvumidza kutevedzera USB zvishandiso | Linux Vakapindwa muropa
Nechekare pane dzimwe nguva pano mu blog takataura nezve basa rakaitwa naAndrey Konovalov (mugadziri weGoogle) muLinux, kubva kubasa rake mukuona kwakakodzera kwekutadza muLinux Kernel USB madhiraivhi uye zvakare nemidziyo yeWifi.
Iye zvino ari kushanda parizvino kuvandudzwa kwemo module nyowani yeLinux Kernel iyo yaakatumidza se "USB Raw Gadget" iyo inotsanangura sechishandiso chinobvumidza kutevedzera madhijitari e USB munzvimbo yemushandisi.
kunze kwaizvozvo inotaura kuti chishandiso chiri kutariswa kuisirwa module iyi mune huru Linux kernel. Google Raw Gadget iri kutoshandiswa neGoogle kurerutsa kuyedza kusanzwisisika kweiyo USB kernel stack ne syzkaller toolkit.
Pakutanga ini ndanga ndichishandisa GadgetFS (pamwe neiyo Dummy HCD / UDC module) kutevedzera madhiraivha e USB ekunyepedzera, asi ipapo yakachinjirwa kune yakasarudzika yakanyorwa interface.
Kurudziro yekumisikidza chimiro chakasiyana kwaive kupa nzira pfupi uye neimwe nzira yakasvibira yekuwana iyo USB Gadget dura renzvimbo yemushandisi, uko chikumbiro chega chega che USB chinoendeswa kunzvimbo yemushandisi yemhinduro.
1 Nezve USB Raw Gadget
2 Maitiro ekuisa iyo Raw Gadget USB module muLinux?
Nezve USB Raw Gadget
Iyo module inotarisira kuwedzera iyo nyowani interface kuronga kune iyo kernel subsystem inonzi "USB Gadget" uye iri kuvandudzwa seimwe nzira yeGadgetFS.
Kugadzirwa kweAPI nyowani kunokonzerwa nekudiwa kwekunanga uye kwakaderera-chikamu kuwana kune Gadget USB subsystem kubva kune mushandisi nzvimbo, ichibvumira zvese zvinogoneka USB zvikumbiro kuti zvigadziriswe (GadgetFS inogadzirisa zvimwe zvikumbiro iri yega, pasina kuiendesa kune mushandisi nzvimbo).
USB Raw Gadget inodzorwa kuburikidza neiyo / dev / mbichana-gadget chishandiso nekufananidza ne / dev / gadget mu GadgetFS, asi ioctl () yakavakirwa interface, pachinzvimbo chekunyepedzera-FS, inoshandiswa mukudyidzana.
Pamusoro pekugadziriswa kwakananga kwezvose zvikumbiro zve USB nemaitiro munzvimbo yemushandisi, iyo nyowani nyowani zvakare inokwanisa kudzosera chero dhata mukupindura chikumbiro cheUSB (GadgetFS inotarisa kururamisa kwevanotsanangudza USB uye kusefa dzimwe mhinduro, zvinovhiringidza kukanganisa kwekuonekwa panguva ye USB stack bvisa bvunzo).
USB Raw Gadget zvakare inobvumidza iwe kusarudza yakasarudzika UDC chishandiso (USB mudziyo wekutyaira) uye mutyairi kubatanidza, nepo GadgetFS ichibatanidza kune yekutanga inowanikwa UDC chishandiso.
Kune maUDCs akasiyana, mazita anofungidzirwa endpoint akaiswa pamhando dzakasiyana dzematanho ekutaurirana mukati meimwe mudziyo.
Chekupedzisira, kana iwe uchida kuziva zvakawanda nezvazvo, unogona kutarisa ruzivo, pamwe nerogi yeshanduko dzakaitwa muUSb Raw Gadget Mune inotevera chinongedzo.
Maitiro ekuisa iyo Raw Gadget USB module muLinux?
Kune avo vanofarira kugona kuyedza iyi module pane yavo system, vanogona kuzviita nekutevera rairo dzakatsanangurwa pano.
YeDummy HCD / UDC ) Tinofanira kuvhura terminal uye mairi tichaenda kunyorera unotevera kuraira:
Nezvo isu tichaenda kunotora dhairekitori nema module atinozo nyora nekuita unotevera kuraira mune terminal:
Uye isu tinoenderera nekuvaisa ne:
Kana tikada kugadzirisa module, tinozviita na:
Iye zvino kune avo vanoda kuisa iyo kernel module. Mune terminal tichaenda kunotora mafaera anodikanwa eizvi nekuita unotevera kuraira:
Unogona kutarisa basa mu chinotevera chinongedzo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » USB Raw Gadget, module yeKernel iyo inobvumidza kutevedzera USB zvishandiso
Endless OS 3.7.7 inosvika ichiwedzera rutsigiro rweiyo Raspberry Pi 4